रूकुम घटनाः पोस्टमार्टम रिपोर्टपछि डाक्टरलाई किन भयो आपत ? – Deep Sanchar
गृहपृष्ठ ∕ समाचार ∕ रूकुम घटनाः पोस्टमार्टम रिपोर्टपछि डाक्टरलाई किन भयो आपत ?
रूकुम घटनाः पोस्टमार्टम रिपोर्टपछि डाक्टरलाई किन भयो आपत ?
दीप संञ्चार असार ५, २०७७ गते १९:२२ मा प्रकाशित
जाजरकोट – जिल्ला अस्पताल जाजरकोटका मेडिकल अधिकृत डाक्टर भूपेन्द्रप्रकाश मल्ल, अमिन शाह र औसरसिंह राठौरको घर खलंगामै पर्छ। तर, तीनै जना डाक्टर चार दिनदेखि घर जान सकिरहेका छैनन्। उनीहरू जिल्लाबाहिरका डाक्टरसँगै अस्पतालभित्रै बसिरहेका छन्।
डाक्टरमाथि जुनसुकै बेला आक्रमण हुन सक्ने भन्दै स्थानीय प्रशासनले अस्पतालको आवास नछोड्न निर्देशन दिएको छ। अस्पतालमा उनीहरूको सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी र प्रहरी खटिएका छन्। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा राजेन्द्र कार्कीले लेखेका छन् ।